दुई अध्यक्ष किन ? ओलीको जवाफः यो टेम्पो होइन ‘जेट’मा दुई पाइलट हुन्छन् | Saajha Khabar
दुई अध्यक्ष किन ? ओलीको जवाफः यो टेम्पो होइन ‘जेट’मा दुई पाइलट हुन्छन्
काठमाडौंः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा दुई अध्यक्षबारे रोचक जवाफ दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभागृहमा भइरहेको नयाँ पार्टीको घोषणासभामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अ‍ोलीले यस प्रश्नको जबाफ रसिक ढंगले दिएका हुन् । किन दुई अध्यक्ष भन्दै प्रश्न गर्नेहरुप्रति कटाक्ष गर्दै ओलीले व्यंग्यपूर्ण जवाफ दिएका हुन् । ओलीले नयाँ पार्टी टेम्पो नभएर जेट विमान भएकाले दुई अध्यक्ष राखिएको बताएका हुन् ।
‘भन्नेहरु भन्छन्, दुई अध्यक्ष भए के गरेको यो ? यो टेम्पो चलाए जस्तो होइन जेटमा पाइलट दुईटा हुन्छ’, अध्यक्ष ओलीले भने, ‘आवश्यकताले यस्तो कुरा ल्याएको हो । एउटा महा–अभियान हामीले चलाउनु छ । यो महाअभियान चलाउन हामी दुईजना छौँ । सल्लाह गरिगरी विचार विमर्स गरीगरी अगाडि बढाउने अठोट गरेका छौँ । संकल्प गरेका छौँ ।’
ओलीले एकीकृत पार्टीको रुपमा नेकपा घोषणा हुनु आफ्नो जीवनको सबैभन्दा खुशीको क्षण भएको समेत बताएका छन् ।
‘जीवनका पहिलेपहिलेका पुराना खुशी बिर्सिएर हो कि आज अर्थात् अहिले मलाई सबैभन्दा खुशी लागेको छ’, ‘यो खुशी यस कारण कि म अध्यक्ष भएको हुनाले स्वभाविक रुपमा श्रेय अलिकति अउँछ । तर, त्यसकारण होइन । ड्राइभर त सिटमा बसेको हुन्छ, गुड्ने त चक्का हो । मत ड्राइभरको सिटमा बसेको हुन्छु । यो खुशीमा तपाईंहरुको योगदान महत्वपूर्ण छ ।’
पुष्पलाल भएको भए : बुढो मान्छे नाच्नु हुन्थ्यो
ओलीले पुष्पलाल धेरै दुःख गरेर कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेको सम्झना गरे । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाकै नाममा पुष्पलाल विदेशमा प्रताडित भएर बसेको सम्झदै ओलीले उनको विशेष सम्झना गरेका हुन् । कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाकै नाममा पुष्पलाल प्रताडित भए पनि न्यायको जित भएको ओलीको भनाइ छ । ‘आज प्रचण्डजीको गला अवरुद्ध भयो । पुष्पलालजी जिउँदो हुनुभएको भए बुढो मान्छे नाच्नु हुन्थ्यो’, ओलीले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतसाथ सरकारमा छ । अब दुई तिहाई कम्युनिस्ट पार्टीका लागि सामान्य हिसाबकिता हो । आउँदो चुनाव दुई तिहाईको कुरा होइन कम्तिमा तीन चौथाई पक्का हो । यो कुरा कसैलाई ठ्ट्टा लाग्नसक्छ । ६ महिना अगाडि कसकसलाई के के कुरा ठट्टा लाग्थ्यो हेर्नुहोस् !’
‘हिन्द महासागरमा कोशीको पानी भेटिदैन’
ओलीले एमाले र माओवादीको एकताबाट नेकपा बनेकाले अब दुवै पार्टी नरहेको प्रष्ट पारे । ओलीले दुई पार्टी एकढिक्का भएको र फुट अब कतै नपाईने प्रष्ट पारेका हुन् । ‘हामी मिश्रणको रुपमा होइन अन्तर घोलित भएका छौँ । हिन्द महासागरमा गएर कोशीको पानी खोज्न थाल्यो भने भेटिदैन’, ओलीले भने, ‘अघिसम्म एमाले र माओवादी केन्द्र थियौँ । प्रचण्ड अर्कै पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो । अहिले अर्को पार्टीको नेता होइन । हामी एक भएका छौँ ।’
ओलीले अहिले नयाँ पार्टी स्थापना गरेको नभएर विभाजित भएको पार्टीलाई नै एक गरेर ऐतिहासिक काम गरेको बताए । ‘हामीले नयाँ पार्टी स्थापना गरेका होइनौँ । पुष्पलालले २००६ सालमा स्थापना गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको थियो । कम्युनिस्ट पार्टीमा गुटबन्धी २००८ सालबाट सुरु भएको थियो । स्पष्ट विभाजन भने २०१७-१८ सालमा भयो । त्यसको पीडा हामीले सहनुपर्यो जनताले सहनुपर्यो । त्यहीबाट हामीले एक हुनुपर्छ भन्ने पाठ सिक्यौँ,’ ओलीले भने, ‘हिजोसम्म
कम्युनिस्टहरु जुट्न जान्दैनन् भन्ने लेखिन्थे । त्यो इतिहास भयो । अब कम्युनिस्ट फुट्न जान्दैनन जुुट्छन् भन्ने लेखिन्छ ।’
ओलीले पात झर्दा स्याउको रुख मरेछ भन्नेहरु फलेको देखेपछि छक्क पर्ने गरेको उदाहरण दिँदै एकता एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीका लागि चमत्कार भएको प्रष्ट पारे । ‘मानिसहरु स्याउको रुखमा पात झर्दा रुख मरेछ मन्छन् । अली पछाडि स्याउ फलेको देखेपछि छक्क पर्छन्’, ओलीले भने, ‘अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘दयर इज नो विन्टर सिजन’ ।’
‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’
नेकपा अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकता दमन र अहंकार देखाउनका निम्ति नभएको बताए। ‘यो एकता देश बनाउने संकल्पका लागि हो। यो जिम्मेवारी सालिनता र जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले पूरा गर्नका निम्ति लिएका हौँ’, ओलीले भने, ‘यो एकता भ्रष्टाचार रोक्नका निम्ति हो। मैले पटकपटक भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिन। म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न। कानुनीराज सुशासन हाम्रो उद्देश्य हो। हाम्रो घोषणापत्रमा पनि हामीले लेखेका छौँ। कानुनी राजको रुपमा अघि बढ्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ।’
सर्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, राष्ट्रियहितलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने उद्घोष ओलीले गरे। उनले विकासका लागि छिमेकीसँग सहकार्य गर्ने कुरासमेत राखेका छन् । ‘विकासका प्रयास हाम्रा मात्र पर्याप्त नहुन सक्छन्। छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्छौँ। सहकार्य गरेर विकास साझेदार बनाउँछाँै। कोही पनि यस एकताबाट विचलित हुुनु पर्दैन’, ओलीले भने, ‘नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकसित राष्ट्रमा उठाउने हाम्रो लक्ष्य हो। हामीले साझा चुनावी घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ।’
ओलीले पार्टीमा सम्भवनाका साथसाथै योग्यता, क्षमता हेरेर जिम्मेवारी दिइने प्रष्ट पारे। ‘विकास र निर्माणका लागि नीति र योजना ल्याउँछौँ। यस्ता कुरामा कोही पनि अन्योलनमा रहनु पर्दैन। यो खुशी र नयाँ इतिहास रचना भएको दिन हो। एउटा नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्यो भन्नेकुरा यही एकताले दिएको छ’, ओलीले भने, ‘नयाँ उचाईमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढ्योे। नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्यो। यस अनुकूल परिस्थितिलाई उपयोग गर्दै नेपाललाई समृद्धितर्फ लाने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ।’
ओलीले बिहीबार पार्टी एकता घोषणा भएको र अबको तीन महिनामा गाउँगाउँसम्म एकता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘हामी सबै कमिटि गठनको प्रक्रियालाई तीन महिनामा टुंगो लगाउँछौँ। नयाँ जोश जागरका साथ काममा लागौँ’, ओलीले भने।
Previous: दैनिक बिहान आधा घण्टा हिँड्नुहोस्, शरिरलाई हुनेछ यी १० चमत्कारिक फाइदा
Next: काठमाडाैंमा पनि डिजिटल र स्मार्ट पार्किङ